Ilaali Business Your Internet Iyadoo a Cyber ​​mas'uuliyadda Insurance
Haddii aad hawlo ganacsi oo internetka ku qabaneysa macluumaad badan oo xasaasi ah oo xog maaliyadeed oo ka wakiil ah macaamiisha iyo dadka isticmaala aad, markaas waxaad u baahan tahay in la caymis haakarisku xada macluumaadka ammaanka. Waxaad keeni karo macluumaadka maaliyadeed ee isticmaala aad iyo tanaasul ay ammaanka dhaqaale haddii haakarisku internet khawano galay aad site in ay xadaan xog xasaasi ah - iyo tan adiga iyo ganacsiga gelin kara ee halista weyn. Laakiin waxay sharxayaan siyaasad caymiska mas'uulka cyber meel, aad difaac fiican ka khataraha internet oo laga yaabo adiga ama macaamiil aad u dhimayaan.
Ma og tahay in Yahoo iyo LinkedIn kuwo kale ayaa la jabsaday galay dhawaan, tanaasulkii faahfaahinta shakhsiga ah ee malaayiin email iyo ganacsiga users Yahoo? Isku dayo ayaa sidoo kale la sameeyey inuu wax xado kaarka deynta iyo macluumaadka gaarka ah laga hor ganacsi, oo aadan rabin in aad naftaada u saaray in ay khatarta noocaas ah iyadoo aan shabaqa ammaanka meel. Ha u malaynin ma in ay tahay mas'uul ka ah shirkadda martigelin si loo ilaaliyo xogta aad ka haakarisku, sababta oo ah waxay laga yaabaa run ahaantii ma noqon dhan lagu xiray in. Sidaas waa inaad saarin amniga ee website gacmaha shirkadda internetka galay, inkastoo ay sidoo kale isku dayaan bests kasta oo suurta gal in ay ilaaliyaan xogta ah ee website-yada ay ku boosteejo.
Waxaa jira shirkado caymis gaar ah ku takhasusay caymiska mas'uulka cyber, iyo waxa kale oo aad ka soo iibsan karaan online si ay uga iibsadaan caymiska ee ganacsigaaga online. Shirkadaha caymiska liability cyber Waxay qiimaynayaan lahaa heerarka weeraro internet ka iman kara aad la kulmi iyo dirqiyo ilaalinta brannmur si loo ilaaliyo xogta iyo macluumaadka ammaanka, ka dibna soo hoos imaad caymis si ay u ilaaliyaan ganacsiga online. Your Caymisku awoodi doonaan in ay si ku filan kuu magdhabo iyo ilaaliyo aad ka dacwadaha qaali, luma ganacsiga, iyo sumcad dhaawacan online.
Marka aad ka fiirsan ku guuleysan kara farsmada heerka sare ah Anonymous iyo khatarta ay keeni in ganacsiga internet iyo macaamiishaadu, aad rabtid inuu ilaaliyo xogta macaamiisha ah iyo faahfaahinta gaarka ah ee maanta helitaanka caymiska mas'uulka cyber. Haddii shirkadaha waa weyn ayaa loo bartilmaameedsan karaa in weeraro internet socda, ka dibna aad tahay marka laga reebo lahayn; iyo haddii aad ganacsi online wax qiimihiisu, ka dibna waxa ay bartilmaameed u noqon kara ra'iisul jebiya online. Caymiska mas'uulka Cyber ​​laga yaabo in qorshaha ammaanka dib-up aad u baahan tahay, oo waxaa laga yaabaa dhan farqiga u dhexeeya guul online iyo khasaaro of ganacsi oo ay weheliyaan dacwadaha. Tag mid ka mid maanta, oo waxaad ku farxi aad sameeyey lahaa.
5 Major Insurance daboolaa waa in aad yahay in la ilaaliyo
Dabka Insurance Claims: Waxa la Sameeyo Haddii Your Business Dhismaha Goes Up In A Fire Dhacdada